Ogaden News Agency (ONA) – Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogaadeeniya ( Oysu ) oo farac ka dhisay Alberta/Canada hogaana doortay .
Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogaadeeniya ( Oysu ) oo farac ka dhisay Alberta/Canada hogaana doortay .
Posted by ONA Admin	/ May 8, 2013
Waxaa maailntii Axada ahayd shir aad looga soo shaqeeyey lagu qabtay magaaladaEdmontonkaas oo ay soo qabanqaabiyeen Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogaadeeniya, shirkaas oo lagaga wada hadlayey sidii ururka Oysu looga hirgalinlahaa jaaliyadaha galbeedka dalkaCanada.
Waxaa shirka lagu soo marti qaaday abwaanka magaca weyn ku dhex leh bulshada soomaalida ogaadeeniya meel kasta oo ay joogaan kaas oo ah Maxamuud Cabdi cumar (Jaango) oo baryahanba bandhig faneedyo ka dhigayey dalka Maraykanka hadana u soo gudbay Canada.
Jaangoo oo khudbad qiimo badan halkaa ka soo jeediyey taas oo xambaarsanayd xikmad halgameed ayaa waxaa ka mid ahaa hadaladiisii; “Waxaad tihiin hogaankii bari iyo mustaqbalkii Soomaalida Ogaadeeniya, waxaana la idiinka baahanyahay sidan aad isu soo xil qaanteen ee aad u go’aansateen in aad umadiina u shaqaysaan in aad waajibaadka idin saaran u gudataan oo aad ka bilowdaan umadan aad ku dhex nooshihiin in aad qadiyadiina ka dhaadhicisaan iyo waliba umada Soomaaliyeed ee aynu walaalaha nahay idinkoo kaashanaya aqoontiina kana faa’iidaysanaya waqtiga aad haysataan.”
Waxaa Shirkii lagu doortay hogaan cusub oo uu yeelanayo ururka dhalinyarada iyo ardayda ogaadeeniya ( Oysu) ee jaaliyadaha gobolka Alberta kaas oo loo doortay halgame Maxamed Ahmed ( xaaji bulaale) oo hadal kooban ka yiri madashii shirka,xilkan aad maanta ii doorateen waxaan uga soo bixi doonaa sida aad iigu dhiibateen ilaahayna waxaan ka baryayaa in uu ii fududeeyo.
Gudoomiyaha jaaliyada magaalada Edmonton halgame ismaaciil C/ laahi oo goob joog ahaa sidii ay hawshu u socotay ayaa laba eray oo dardaaran ah ka soo jeediyey waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta ururk ii Oysu uu ka hirgalo markii ugu horaysay jaaliyadahan Alberta ,waxaan idinkula dardaarmayaa in aad sida ugu haboon u hawlgashaan,ugu adeegtaan dadkiina isuna kaashataan cadowgiina idinkoo midaynaya cududiina,hadii ay noqonlahayd jaaliyada, ururka haweenka, OYSU iyo aqoonyahankeenaba waxaana inoo balan ah halmeel in aan uga soo wada jeedsano cadowgeena iyo
cadow kalkaalkeenaba taas oo aan uga dan leeyahay kuwa afsoomaaliga ku hadla ee uurka amxaarada ka ah.
Shirkii wuxuu ku dhamaaday jawi aad u wanaagsan oo ay aad ugu farxasanayeen dhamaan ka soo qayb galayaashii shirka.